Indlu Yesihlahla - Isiphephelo Sehlathi - I-Airbnb
Indlu Yesihlahla - Isiphephelo Sehlathi
Córrego do Bom Jesus, State of Minas Gerais, i-Brazil
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Tibério
U-Tibério Ungumbungazi ovelele
Isipiliyoni sezikhathi zokuhlala endlini ephezulu esihlahleni se-Maçaranduba yekhulunyaka asichazeki! Sinikeza enye indawo yokuhlala ethokomele kwenye yezindawo eziphakeme kakhulu eMantiqueira. Imvelo entabeni idlangile! Umsindo womoya, ukuhuba kwezinyoni kanye nokuhwashaza kwezihlahla kwakha i-symphony. Sicabanga ukuthi indawo lapho wonke umuntu ehlala khona iphazamisa ukuba khona kwabo. Ngakho-ke, sinikeza ngendawo enikeza ukuzizwisa okungcono kakhulu ezivakashini.
Sifakwe emvelweni egciniwe lapho kulula khona ukucabanga ngezilwane zasendle ezidla eduze kakhulu, izinyoni zihlezi ngokukhululekile emagatsheni aseduze kwefasitela, iziqongo zemithi ngendlela ye-surreal (imininingwane: kukhona i-treetop yekhulunyaka ngaphakathi kwekamelo), kanye nombono omuhle wezintaba emkhathizwe ongapheli ngezindlela eziningi.
Lapha kungenzeka ukuphuza amanzi ompompi ngaphandle kokukhathazeka, sinakekela kahle kakhulu umthombo wethu kanye nentwasahlobo.
Izindawo zokuhlala ezingaphakathi kwendlu yesihlahla zenzelwe ukuthi zikwazi ukuphumula noma zishaje ngokunethezeka futhi zibe lula. Sihlinzeka ngezinto zekhishi ezihlanzekile, umbhede kanye nebhavu, sihlinzeka ngezinsimbi zomculo (isiginci, ukulele) nezinkuni.
Kithina imininingwane ibalulekile... Phila izikhathi eziyingqayizivele empilweni yakho!!
Sitholakala phezulu kwezintaba zeSerra da Mantiqueira endaweni engamamitha angu-1450 ukuphakama. Sihlala endaweni ethulile lapho ukuphila kuba lula futhi kubonakala kuhamba kancane. Izintaba ezimangalisayo zedolobha zinikeza indawo efanelekile yabasebenzi bezemidlalo ngokuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, indiza yamahhala (Paraglider), ukugibela, phakathi kwabanye abaningi. Sizungezwe iziqongo, izimpophoma, imizila embalwa futhi, kunjalo, nokudla okwaziwayo nokumnandi okuvela eMinas Gerais. Ukucabanga lobu buhle kuyajabulisa!!
Into emangalisayo ngempilo ukwabelana ngolwazi nolwazi. Sithanda ukusebenzelana nezivakashi.
UTibério Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Córrego do Bom Jesus namaphethelo